Magweta achiratidzira muHarare achinyunyuta nekwaanoti kutyorwa kwekodzero dzawo nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo.
Magweta aratidzira muHarare neChishanu achiti haasi kufara nemabatirwo aanoitwa nemapurisa paanenge achimiririra vasungwa.
Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza mapurisa nekuita mhirizhonga yakangangana nemagweta pamwe neveruzhinji.
Rimwe remagweta aya, VaLenin Chisaira, vati havasi kufara nekushungurudzwa kunoitwa magweta nemapurisa panguva yavenenge vachimirira vasungwa uye vati vari kushushikana zvikuru nekurohwa kwakaitwa rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu VaDouglas Coltart.
VaColtart vakazvindikitwa nemapurisa pakamba yeHarare Central mazuva mashoma adarika, apo vakange vaenda kunomirira mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, avo vakanga vasungwa.
Rimwe remagweta anorwira kodzero dzevanhu VaJeremiah Bhamu, vatiwo havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa magweta nemapurisa uye vati vari kushushikana zvikuru nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa ayo anosungirwa kunge achichengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Kuratidzira kwaitwa nemagweta kwaitwa varatidziri ava vakachengetedzwa nemapurisa. Kunyange hazvo magweta aya asina kukwanisa kuona VaKazembe pamwe nemukuru wemapurisa VaGodfrey Matanga, akwanisa kusiya magwaro enyunyuto kumahofisi avo.
Kunyange tisina kukwanisa kutaura naVaKazembe naVaMatanga, mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyathi, vaudza magweta anga achiratidzira aya kuti vachasvitsa magwaro enyunyunyuto aya kuvakuru vavo, vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi.
Asi VaMatanga vakaudza VaKazembe pavakashanyira muzinda wemapurisa neChitatu kuti mapurisa achaedza pose paanogona napo kuchengetedza mutemo pamwe neveruzhinji sezviri mubumbiro remitemo yenyika.
Kuratidzira kwaitwa nemapurisawo kunouyawo apo mapurisa akazvindikita nhengo dzeMDC pamuzinda webato radzo svondo rapera padzainge dzakamirira kuturirwa mashoko nemutungamiri webato iri VaNelson Chamisa.